Wasiir Hadliye: Maamul goboleedyadu ha xoojiyaano gurmadka qaxootiga Yemen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiir Hadliye: Maamul goboleedyadu ha xoojiyaano gurmadka qaxootiga Yemen
A warsame 30 May 2015 30 May 2015
Mareeg.com: Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya, C/salaam Hadliye Cumar ayaa ugu baaqay Maamullada Somaliland, Puntland, iyo Jubbaland in ay xoojiyaan ka qeyb-galka gurmadka loo fidinayo dadka dib ugu soo laabanaya dalka kana soo cararaya dagaallada ka socda Yemen.
Wasiir Hadliye ayaa sheegay waqtigaan loo baahanyahay in maamul goboleedyada dalka kajira ay u istaagaan Gurmad u fidinta dadka Soomalida ah ee ku soo laabanaya qaybo badan oo ka mid ah dalka, kuwaas oo hadda u baahan in la caawiyo.
Wasiirku waxa uu intaa raaciyay in ka Dowlad Federaal ahaan ay soo dhaweynayaan dadkaasi Soomaaliyeed, isagoo ugu baaqay maamullada Soomaaliland, Puntland iyo jubbaland in si wadaniyadnimo ah dadka ay usoo dhaweeyaan, Gurmadna u fidiyaan maadaama ay yihiin dad dhibanayaal ah, oo duruufo heystaan.
Dadka Soomaaliyeed ee dib uga soo qaxaya Yemen ayaa inta badan kasoo dega dekedaha Boosaaso iyo Berbera, halkaasoo ay kala maamulaan Puntland iyo Somaliland.
Yaa loo qabtay dilkii xildhibaan Yuusuf Maxamed Dirir?